Ntuziaka MSN.com Microsoft na atụmatụ ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Na-arụ ọrụ na Microsoft ọhụrụ MSN.com okirikiri nhọrọ ukwuu
Microsoft ekwuputala na ya ga-eweta ụdị ọhụụ nke ọnụ ụzọ msn.com ya, nke (dịka ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya si dị) lefuru anya oge dị ukwuu; ya onwe ya ga-enye mmelite ohuru maka onye obula choro iji ya, nke enwere ike ime na ihe nchọgharị Internetntanetị ọ bụla anyị na-ejikwa.
Ugbu a nke ọma Kedụ maka ịnụ ụtọ ụdị ọhụụ ọhụụ a tupu Microsoft akwadoro ya na webụ? Nke a nwere ike ịdị ka ọrụ na-agaghị ekwe omume ịme n'ihi na Microsoft ewepụtabeghị ya n'ụzọ zuru oke, ọ bụ ezie na ọ kpọtụrụ uche na o nwere ike iji "preview" nke ọnụ ụzọ msn.com a; Enwere ọrụ dị iche iche ị nwere ike ịmasị, nke ahụ bụ ebumnobi nke isiokwu a ga-akụziri gị otu esi edozi ọrụ ọhụụ ọ bụla "n'ọdịnihu".
Nweta ụdị msn.com ọhụrụ nke Microsoft chọrọ
Anyị na-akwado ka ị nyochaa interface kpochapụwo msn.com n'oge a, ka ị nwee ike ịchọta nnukwu esemokwu ga-apụta ozugbo, mgbe ị nwetara atụmatụ ọhụrụ Microsoft chọrọ. Iji mee nke a, anyị na-atụ aro na ihe izizi ị ga-aga na njikọ nke «preview of msn.com», nke ga - egosi gị nnabata nnabata na site na nke, naanị ị ga - ahọrọ bọtịnụ edo edo na - ekwu «jiri ya ugbua".
Mgbe ịpị bọtịnụ a, ị ga-ahụ interface msn.com ọhụrụ; Na elu ị ga-enwe ike ịmasị ụdị ogwe ngwaọrụ nke mejupụtara isi ọrụ Microsoft; Primarily ga-ahụkarị n'ụlọ mmanya nhọrọ a:
Outlook.com, bọtịnụ ga-enyere gị aka ịlele ozi ịntanetị na igbe mbata gị.
N'aka nke ọzọ, Office ga-enyere gị aka iji ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, mana n'ịntanetị.
A ga-etinye OneNote na ogwe ngwaọrụ a, nke ị nwere ike iji nyochaa ihe ndetu ma ọ bụ ncheta ndị ahụ niile ị kwadebere n'oge ọ bụla.
Ọrụ nnweta igwe ojii OneDrive dịkwa, nke ga - enyere gị aka ịme ma jikwaa ihe ị kwadoro na igwe ojii na ọrụ Microsoft.
Naanị anyị edepụtara ọrụ ndị a na-ewere dị ka nke kachasị mkpa na Microsoft, ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ ị ga-achọpụta ka ị na-ahọrọ obere akụ ahụ na-atụ aka nri. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na kọmputa nkeonwe, ị kwesịrị ị na-abawanye na windo ihe nchọgharị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ha niile; Nke a bụ otu ihe na-adọrọ mmasị nke Microsoft na-atụpụta na atụmatụ ọhụrụ nke msn.com, ebe ọ bụ ihuenyo ga imeghari ka ọ bụla nke akụrụngwa na ị na-eji, nke na-egosi, na kọmputa nkeonwe, mbadamba na ọbụna ekwentị mkpanaaka.
N'elu aka nri ị nwere ihe ga-enyere gị aka "banye" na ọrụ Microsoft ọ bụla, nke nwere ike ịbụ akaụntụ Hotmail ma ọ bụ Outlook.com; nke ikpeazu a di nnoo yiri ihe a na-enwe mmasị ugbu a na Mozilla Firefox ma ọ bụ Google Chrome. N'otu akụkụ, ị ga-ahụkwa obere gia, nke ga - enyere gị aka ịhazi ọrụ ole na ole ngwa ngwa:
Hazie ibe a. Site na nhọrọ a ị ga - enwe ohere ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ụfọdụ nhọrọ ka ọ bụrụ naanị ole na ole ka egosiri na ogwe interface; Ọ bụrụ na ị tụlee na ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a agaghị enwe obi ụtọ ma ọ bụ gụọ n'oge ọ bụla, mgbe ahụ ị nwere ike iwepu ha na ngalaba a nke nhazi ahụ.
Tinye msn dị ka isi peeji. Microsoft na-atụ aro na ndị ọrụ ya niile na-eji ọrụ msn.com arụ ọrụ dị ka ibe nnabata, nke bịara ju ọtụtụ ndị anya, n'ihi na nke a anaghị atụ aro na a ga-eji engine Bing.com ya.
Wepụ preview. Ọ bụrụ n’ịchọghị ịga n’ihu na-enweta “nhụchalụ” nke imepụta msn.com ọhụrụ ahụ ị nwere ike iji ọrụ a laghachite na nhazi mbụ.
Gbanwee asụsụ na ọdịnaya. N'ebe a, ị ga-ahụ obere akụ adaala, nke ga-enyere gị aka ịhọrọ asụsụ nke ị kacha mara nke ọma mgbe ị na-enyocha akụkọ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ dị na msn.com a. (Mụta gbanwee asụsụ Windows 7)
Dịka ị nwere ike ịmasị, atụmatụ ọhụrụ Microsoft nyere maka msn.com bụ ihe ọhụụ n’ezie, ebe nhazi nke interface ya na-aghọkwa otu akụkụ kachasị mfe ma dị mfe ịme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Na-arụ ọrụ na Microsoft ọhụrụ MSN.com okirikiri nhọrọ ukwuu
Apple na-ewepụta iPhone 6
Gbochie Office 2013 n’irighị ọtụtụ akụrụngwa Windows